TRUMP oo weeraray Ilhaan Cumar, mar kalena u gefay Soomaaliya - NorSom News
TRUMP oo weeraray Ilhaan Cumar, mar kalena u gefay Soomaaliya
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump oo jeediyey khudbad dheer ayaa weerar afka ah ku qaaday Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Golaha Kongareeska dalkaasi, isagoona sidoo kale u gefay Soomaaliya.
Trump oo taageerayaashiisa kula hadlayey magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma ayaa sheegay in Ilhaan ay dooneyso inay Mareykanka ka dhigto dalka ay ka soo qaxday oo kale ee Soomaaliya.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in Soomaaliya aysan ka jirin wax dowlad ah iyo kala dambeyn, sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa xusay in Soomaaliya aysan laheyn ciidamo dhisan, sida Boolis iyo Nabad Sugid, isaga oo tilmaamay in kaliya uu ka jiro amar la’aan iyo jahwareer.
“Ilhaan Cumar waxaa ay dooneysaa inay Mareykanka ka dhigto dalka ay ka timid ee Soomaaliya oo kale oo aysan ka jirin wax dowlad ah, boolis ka ma jiro, nabad kama jirto, balse waxaa kaliya ka jira amar la’aan iyo jahwareer , waxayna noo tilmameysaa halka uu dalkeena u socon lahaa, Waxaan leenahay Maya…Maya.” ayuu yiri Madaxweyne Trump.
Ugu dambeyn wuxuu ku eedeeyey Ilhaan Cumar inay u dagaaalameyso inay galangal xoogan ku yeelato dowladda Joe Biden oo ah Murashax xisbiga dimuqraadiga ee xilka madaxtinimada kula tartami doono Trump.
Si kastaba ha’ahaatee ma’ahan markii ugu horreysay ee uu Trump ku dhawaaqo hadal xanaf leh oo ka dhan ah Soomaaliys, isagoo ku weerarayo Ilhaan Cumar oo asalkeedu yahay Soomaali, balse haatan ka tirsan Kongareeska Mareykanka.
Previous articleMid kamid ah haldoorkii soomaalida Norway oo isbuucan Oslo ku geeriyooday.
Next articleUK: Weerar mindi loo adeegsaday oo 3 qof lagu dilay.